Tsy mandry fahalemana eto Antsirabe tato ho ato na misy aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, saingy tsy mahasehaka izany izy ireo.
Nisehoana fanafihana mitam-basy teny amin’ny Fokontany Antsanga-Ambohimanabe, eto Antsirabe ambonivohitra ny alin’ny alahady teo. Vola 20 tapitrisa no lasan’ireo jiolahy, ary olona 4 no nodarohan’izy ireo, ka ny 2 no tena naratra mafy.
Toeram-pivarotana zava-pisotro, manamorona ny làlam-pirenena faha 34 mivoaka an’Antsirabe, akaiky an’Andraikiba ity voatafika ity.
Raha ny fanazavana azo avy any an-toerana, dia tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina no tonga ireto andian-jiolahy ireto. Mbola nisy olona nisotro teo amin’io toerana io tamin’izany, fa tsy nisy nanam-po mihitsy kosa, fa ireo jiolahy efa teo am-pivarotana toy ny mpanjifa rehetra.
Tampoka nefa dia nanapoaka basy ny iray tamin’izy ireo, ary teo vao samy taitra ny rehetra, satria noheverina ho olona mpanjifa ihany ireto jiolahy ireto.
Tovolahy efatra no nodarohan’ireo jiolahy, ka ny roa izay voakapa famaky ny lohany no tena voa mafy tsy nahatsiaro tena noho ny rà very be loatra tamin’izy ireo.
Raha ny nambaran’Atoa Randriamanantena Razafindrabe Aimé, sefo Fokontany dia ny vola teo am-pivarotana no nalain’ireo jiolahy ka 150 000 Ar no lasany tao, ary nahagaga mihitsy koa, hoy hatrany ny fanazavana, fa tonga dia niditra ny trano tany anatiny izy ireo, ary ny efitra nisy ny fitoeram-bola iray no novantanin’izy ireo toy ny efa nisy nanoro mihitsy, satria nisy ireo vola 20 tapitrisa Ariary tao, lasan’ny jiolahy ireo.
Tsy nisy sahy nivoaka ny Fokonolona noho ny tahotry ny poa-basy, ary dia nanara-po ireo andian-jiolahy efa ho 15 raha ny nambaran’ny voatafika, ary nisy basy tsy latsaky ny roa no nentin’izy ireo.
Nizotra niakandrefana nanaraka ny arabe ireo jiolahy rehefa nahazo izay notadiaviny tao, ary mbola nanapoaka basy in-droa indray aza.
Tsy mbola mpitranga teny Atsanga-Ambohimanabe moa izany fanafihana mitam-basy izany hoy hatrany ny sefo fokontany teny an-toerana.